Raila Odinga oo markale ku celiyay in wax khilaaf ah uu dhaxeynin hogaamiyayaasha Cord – The Voice of Northeastern Kenya
Raila Odinga oo markale ku celiyay in wax khilaaf ah uu dhaxeynin hogaamiyayaasha Cord
Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee Cord Raila Odinga aya markale ku celiyay in uusan jirin khilaaf u dhaxeeya hogaamiyayaasha isbahaysigaasi.
Hadalkan ayaa ku so aadayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu cirka isku shareeray hadalada qalafsan oo ay isku jeedinayeen sedexda qof ee hogaanka u haysa Cord oo kala ah Raila Odinga, Moses Wetangula iyo Kalonzo musyoka.
Mid walbo ayaa waxaa uu ugu baaqay midkiisa in uu u dhaafo tartanka loogu jiro qofki qaban lahaa hoganka Cord si uu ugu tartamo xilka ugu sareyo dalka marka la gaaro doorashada 2017-ka la filayo in ay dalka ka dhacdo.
Sedexdan hogaamiye oo isbucya kadib shalay isku arkay xaflad aas eheyd ayaa waxay sheegen in uusan jirin wax khilaaf ah oo dhexdooda yaala.
Dhanka kale wasiradii hore ee biyaha Charity Ngilu oo ka qeyb gashay aaskaasi ayaa dhankeeda daboolka ka qaaday taagerida ay u hayso isbahaysiga Cord iyadoo markii hore si aad ah uga gabsaneysay mustaqbalkeeda siyaasadeed.
Ngilu ayaa ugu baqday hogaamiyayaasha Cord in isbahaysigooda ay ku soo daraan qof dumar ah maadama sedexda qof ee hogaanka u hayso Cord ay yihiin rag.
← Kalkaaliyeyaasha Tharaka Nithi oo ku hanjabay shaqo joojin
Ururka Macalimiinta oo si kulul u cambaareeyay talaabadii lagu kala diray saraakisha waxbrashada Countiga Siaya →